Domà Rosiana, Nanasa Olomalaza Avy Ao Amin’ny Youtube Mba Hiresaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Mey 2017 5:05 GMT
22 May 2017, Sasha Spilberg, kintan'ny Youtube Rosiana, miteny amin'ny Domàm-panjakana. Sary: Domàm-panjakana Rosiana
Fotoana henjana ho an'ireo tanora tao Rosia ireo volana roa lasa, izay nanasaziana sy namingavingan'ireo mpampianatra, hatreny amin'ny anjerimanontolo, manerana ny firenena ireo mpianany naneho tampoka ny fahalinany amin'ny fikatrohana. Saingy ireo Rosiana politisiana no tena nitebiteby mafy vokatr'ity rivotra politika vaovao ity.
Samy niasa saina momba ireo tanora Rosiana ireo mpanao lalàna federaly, tamin'ny sehatra rehetra, ka nanome fanasàna ho an'i Sasha Spilberg, 19 taona, olomalazan'ny Youtube, mba hiresaka tao amin'ny fivorian'ny Domàm-panjakana tamin'ny Alatsinainy teo. Fivoriana izay feno hipoka tokoa.
Vehivavy iray nilona tanaty koveta be iray fandroana feno ovy fisaka voaendy ho an'ireo 5 tapitrisa mpanjohy azy ao amin'ny YouTube, tonga nitsidika ny Domà i Spilberg ho ampahany amin'ny ezaka vaovao ataon'ny Rosia Mitambatra, antoko eo amin'ny fitondràna, mba hitrandrahana làlana “hanakànana ny tanora tsy ho atao fitaovana sy hery manetsika any anatin'ireo hetsipanoherana.”
Efa tao anaty fahamailoana daholo ireo manampahefana rehefa nahita tanora an'arivony sy mpianatra teny amin'ny anjerimanontolo tonga nanjohy ireo hetsi-panoherana ny kolikoly natao nanerana ny firenena ny 26 Martsa teo, izay tamin'ny ampahany betsaka dia ilay andrandraina ho filoha Alexey Navalny no nikarakara azy. Fihetsiketsehana nikendrena manokana ny Praiminisitra Dmitry Medvedev, izay nampangain'i Navalny ho nanaiky tsolotra goavana tamin'ny alàlan'ny tambajotran'ireo fikambanana mpanao asa soa manao kolikoly.
“Tsy dia goavana loatra amin'ny resaka politika aho, na ny anaran'ireo antoko politika rehetra, sy ny sisa, saingy haiko ny fomba firesahana amin'olona maro,” hoy i Spilberg teo anatrehan'ny Domà ny Alatsinainy teo. “Ny iraka tontosaiko dia ny hanampy hanamora ny fifampiresahana eo amin'ny fanjakana sy ny fiarahamonina, izay misy ahy.”
Nizara torohevitra vitsivitsy ihany koa i Spilberg : “Mitovy amin'ny mpifidy ihany ireo mpamandrika ao amin'ny Youtube, afa-tsy ny hoe tsy hita avy hatrany eo noho eo ny valiny. Ny tsirairay amin'ireo lahatsariko dia toy ny fifidianana kely. Nangarahara tanteraka aho hatramin'ny faha-13 taonako, ary tsy nisy halemena — tsy nisy famoromporonana na hakamoana — ka tsy niteraka valiny avy hatrany avy amin'ireo mpanaraka ahy. Manaova mangarahara: mizarà lahatsary ao amin'ny Youtube, ary mandefasa zavatra ao amin'ny VKontakte, na amin'izay tambajotra sosialy tianareo indrindra.”
Taorian'ny namelabelarany ity tetikady mafonja ity mba hakàna ny fon'ireo tanora, nihemotra tampoka i Spilberg avy eo, tamin'ny fitenenana tamin'ny Domà fa tsy mbola mila avy hatrany ireo mpitoraka bilaogy amin'ny alàlan'ny lahatsary ry zareo politisiana. “ Tsy mbola ao ilay ampahan-taona, ary mbola kely loatra ny fidònany. Ho ahy, nifidy aho tamin'ireny fifidianana ireny ary hanohy hifidy, saingy maminavina ny hifidy any amin'ny biraom-pifidianana fa tsy ety anaty tambajotra sosialy.”
Nofaranan'i Spilberg ny fanamarihany tamin'ny nitanisàny ny momba ilay lahatsarin'ny “namany” mpikirakira Youtube, Ruslan Sokolovsky, ilay bilaogera avy ao Yekaterinburg tsy mino ny fisian'Andriamanitra, ary tsy ela akory izay no nomena sazy mihantona 3 taona sy tapany noho ny faniratsirany ireo mpitondra fivavahana tamin'ny alàlan'ny lahatsary mananihany, isan'izany ny lahatsary iray mampiseho azy milalao Pokemon Go tao anaty katedraly iray.
“Miala tsiny aho milaza ity, mazava loatra fa tsy adala izy akory,” hoy i Spilberg tamin'ny Domà, nilaza tamin'ireo solombavambahoaka fa “ny Adala dia mila tsaboina na ampandoavina sazy.”
Fihemorana indray, anefa, avy eo i Spilberg nampitandrina hoe “ny fanenjehana olona tahaka izany” dia “henjana sy tsy fanao,” ary manimba ny fitokisan'ny tanora ny governemanta.
Tamin'ny volana lasa, efa niseho taminà lohateny vaventy i Spilberg noho ny nahavitàny nitafa tamin'i Vladimir Medinsky, Minisitry ny Kolontsaina ao Rosia. Tsy toy ireo lahatsary hafa efa nataony nanasongadinany fahasahiana na mozika tsy dia ampy traikefa loatra, fifanakalozan-dresaka nivantana be ilay tafa nifanaovan'i Spilberg tamin'i Medinsky, izay nilazan'ilay minisitra federaly hoe ny aterineto dia fitaovan'ny vaninandro maoderina ho fanapariahana ny kolontsaina Rosiana.